भोक्राहा । होलि तथा फाल्गुन पूर्णिमाको अवसरमा सुनसरीकाको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका कार्यपालिकाको आयोजनामा बुधबार फाल्गुन पुर्णिामा तथा होली पर्वको शुभ अवसरमा बृहत शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा होलि शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम संचालन भ...
भोक्राहा। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड न. २ अकाहा बजारमा रहेको जलेश्वर शिव मन्दिरले महाशिव रात्रिको अवसरमा कलश यात्रा सम्पन्न गरेको छ । प्रत्येक बर्ष महाशिव रात्रिको अवसरमा निकाल्ने गरिएको कलश यात्रा यस बर्ष पनि भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। आज मंगलबार महा शिवरात्रीको अवसरमा जलेश्वर शिव मन्दिरमा कलश यात्रा गरि जल अर्पण गरिएको मन्दीर समितिले जनाएको छ । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका १ र...
ललितपुरको सुनाकोठीस्थित बालकुमारी मन्दिरबाट हराएको मूर्ति फेला परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले खुमलटारस्थित क्लासिक टावरको पछाडि रहेको एक मन्दिर नजिक आज बिहान मूर्ति फेला परेको जानकारी दिए ।ललितपुर प्रहरी प्रमुख यज्ञविनोद पोखरेलका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पको नजिक रहेको करूणा मन्दिर अगाडि मूर्तिजस्ताको तस्तै भेटिएको छ । बालकुमारी माईको उक्त मूर्तिलाई प्रहरीले जावलाखेल लगि...
राजा रणबहादुर शाहले कस्तो हुक्का तान्थे ? पशुपति क्षेत्रको पश्चिम ढोका सामुन्ने रहेको पशुपतिनाथ महास्नान घरमा राजा रणबहादुरको हुक्का ज्यूँका त्यूँ छ । यो हुक्कालाई पशुपतिनाथ सङ्ग्रहालयमार्फत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रदर्शनीमा राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि कोषले पशुपति क्षेत्रको महास्नान घरमा नै सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कोषले ठ्याक्कै मिति भने तय गरिसकेको छैन तर पन...
इस्लाम धर्मावलम्बीले आफ्नो दोस्रो ठूलो पर्व बकर ईद (इदुल जोहा) आज मनाउँदैछन् । मुस्लिम समुदायले दोस्रो ठूलो पर्वका रुपमा सद्भाव एवं शुभेच्छा आदानप्रदान गरेर यो चाड मनाउँछन् । मुस्लिम समुदायले यस पर्वका दिन सामूहिक रूपमा नमाज पढ्दै एकआपसमा शुभकामना साटासाट गर्ने गर्छन् । तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण इस्लाम धर्मावलम्बीले सामूहिक रुपमा नमाज पढ्न नपाउने अवस्था छ । आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, मेलमिलाप...
काठमाडौं – दर्शनार्थीका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । साउन ७ सम्मको बन्दाबन्दी अवधि सकिएलगत्तै मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले जानकारी दिए । “मन्दिर खुला गरिए पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट बच्न आवश्यक ठानिएका सबै पालना गर्दै गराउँदै मन्दिर खुला हुन्छ”, उनी भन्छन् । महादेवको अतिप्रिय महिना र प्रिय सोमबार मानिने यो म...
आज दहीचिउरा खाने दिन । आजको दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा पनि मनाईन्छ । नेपाली समाजमा प्रत्येक वर्षको असार १५ मा धान रोप्ने मध्यसमयको अवसर पारी दहीचिउरा खाने चलन प्रचलन छ । वर्षदिनका लागि धानको जोहो गर्नका निमित्त असार महिनामा रोपाई गरी सोही महिनाको मध्य तिथिका रुपमा दहीचिउरा खाने प्रचलन गरिएको हो । नेपाली समाजमा ‘असारको १५ दहीचिउरा खानू, साउनको १५ खिर’ भन्ने भनाइ छ । मानिसहरु जङगली युगबाट ...